ingqalasizinda ujantshi traffic kuyinto eziyinkimbinkimbi lobuchwepheshe-zezimboni eziyinkimbinkimbi. Ngo nokuqukethwe kwalo, ukusebenzisa izindlela ezihlukahlukene mechanical ukuqinisekisa ukuthi zidinga aqashelwe ngokucophelela kanye nokugcinwa. Ukuhlukumeza kancane kungaholela ingozi noma inhlekelele kube nemiphumela mikhulu. Ngenxa yalesi sizathu, izinhlangano zezokuthutha banamathela imithetho wokusebenza lobuchwepheshe (Pte). Yini eyenza le dokhumenti? Okokuqala ugxile izinyathelo zokuvimbela, okuyinto ukuqinisekisa ukuthembeka nokusetshenziswa kwezingqalazizinda ujantshi kanye isizinda bezokusebenza okwamanje, kanye ukunweba ukuphila inkonzo bathole ezinye zezici zalo. Uthole yalomsebenti enze imisebenzi ekhethekile isevisi.
Yini ehlanganisiwe ingqalasizinda ujantshi?
uhlu Uphiko lezinto abathintekayo ekugcinweni ojantshi, ziyahlukahluka kuye ngokuthi izimo yokusebenza ethize kanye umthwalo phezu umugqa ezokuthutha. Kodwa kukhona izakhi eziyisisekelo ezenza leli eziyinkimbinkimbi. Eyokuqala indlela emabhulohweni eziteshini, izipikha ukuqondisa ukuqhubeka kwezinto zokuhamba. Futhi, ingqalasizinda kuhlanganisa izimoto ezahlukene, okuyinto ingasetshenziswa ukuthuthwa kwezimpahla noma abantu. into Abaningana impela unesibopho futhi ingxenye block. Le ngxenye obusebenzayo i hola inter-ehhovisi, uhlu imisebenzi zihlanganisa inhlangano yokuxhumana futhi mkhosi.
Kufanele kuqashelwe ukuthi supply othomathikhi kusho amasignali ubheke izinto ukuthi iningi uvalwe ezilungisiwe Pte. Lokho usungula imidanti kule ngxenye? Lokhu kusekela ukuqinisekisa ukusebenza okufanele kwe isiginali, ukulawula yokusebenza imingcele nasekubulaleni evamile ye Samandla imisebenzi. Ngo izitshalo yesimanje ngokwethukela kusetshenziswa kakhulu electronic control block amasayithi, ngakolunye uhlangothi, silondoloza abasebenzi emsebenzini ezingadingekile, kodwa ngakolunye - ziwumthwalo umthwalo omkhulu phezu kwezintaba abasebenzi ngubani aphoqelelwe ukuba silondoloze ukusebenza efanele imishini.
imisebenzi Okujwayelekile kwabasebenzi
amasevisi Technical nokusebenza ingqalasizinda eyenziwa umuntu ogunyaziwe ngokuqondile le nhlangano enikezela wesitimela zokuthutha, noma third-party abasebenzi, ukuthatha phezu izibopho abafanele ngaphansi inkontileka. Imisebenzi kwabasebenzi ukuqinisekisa indawo ephephile elawula amasu ngamunye ujantshi izindawo. Lokhu kusho ukugcinwa njalo okuhle izingxenye ingqalasizinda lobuchwepheshe, ekuvimbeleni izingozi ngephutha nezinsongo.
Kwimodi ejwayelekile, izisebenzi esiteshini kufanele silondoloze futhi izitimela. Regulations zidinga ukuba athathe izinyathelo ngesikhathi esifanele ukuze alungise amaphutha. Ikakhulu, i-ezivamile izimo eziphuthumayo libhekisela ipheshana isimiso. Ezimweni ezinjalo, abasebenzi kufanele lithumele amaphepha afanele izingoma amasignali serviced nokwenza imizamo eyenziwayo ukuze kuqedwe inkinga Ngokugawula kujantshi.
Ukuhlolwa Asebenza izingxenye ingqalasizinda
Imithetho zidinga service izisebenzi hhayi kuphela ukubhekana amaphutha non-standard, kodwa futhi kusengaphambili ukurekhoda izingozi kuzona. Waqaphela ukuthi iqoqo izinyathelo nge ukuhlolwa njalo kujantshi izinto ezizungezile. Ngokwesibonelo, audit wadalula izindawo zobuchwepheshe, angabanjwa ngamathuluzi okuzenzakalelayo, amadivaysi, futhi izakhiwo ehhovisi, kanye ngqo amathrekhi ujantshi abekho esidlangalaleni. Isici esibalulekile salo lolu hlolo iyona kwamangqamuzana ukufinyelela amalungelo izigaba ezahlukene izisebenzi kokwenza Pte. Yini obeka indinganiso kule ngxenye? Regulations abonisa ukuthi umnikazi zigcinwe ingqalasizinda kufanele banqume ukuthi amalungu ekomidi ngubani zihlolwa ngesikhathi esifanele. Ngokusekelwe idatha wokubuyekeza etholwe amarekhodi ihlanganiswe olukhombisa izici ukuphathiswa izinto.
Inhlangano kwezimiso umsebenzi wokulungisa
Indima ebalulekile enhlanganweni ukulungisa imisebenzi kuyinto shejula ukuhlela izimo ukuqaliswa yabo. Ikakhulukazi, inhloko yabangamashumi kusengaphambili kanye neKhomishini kumele ithole iwindi zobuchwepheshe lapho umkhiqizo zingase zisebenze. Lezi zikhathi ingahlala okuyisilinganiso sabangu-1-2 amahora. Kulokhu, zonke kwenzeka lolu hlobo adinga ukwesekwa kwagcizelela for alamu izinhlelo ezokwenza ukulawula okwenzekayo kusayithi lakho. Indlela libeke imithetho ukusebenza lobuchwepheshe ojantshi, abasebenzi kudingeka ukusungula Umsakazo noma ukuxhumana ngocingo phakathi abasebenzi, igumbi ukulawula kanye ikhanda. imisebenzi yokwakhiwa Direct yenziwa amaqembu ezikhethekile, imishini izakhiwo namakholomu ngomshini. Phakathi operation evamile avamile umsebenzi umkhiqizo owabeka izakhiwo yokufakelwa, ujantshi amathrekhi, inethiwekhi contact idivayisi Ilokhi futhi yinye.
Ukudala izimo lokuvalwa nokuvulwa hauls
Isidingo ngaphezulu ezinkulu ukulungiswa eziphuthumayo nokwakhiwa Kuhilela imithetho nokuhambisana. Ukuvala izindlela umphakathi kudinga oda okuhambisanayo lwekhanda ethile ujantshi ingqalasizinda. Ngesikhathi lokhu umbuso okungatheni kungase kuhlale 1-2 izinsuku nge isaziso oyisibopho Federal Office of ujantshi. Lapho lesi saziso kumele ithunyelwe ezinsukwini ezingu-10 ngaphambi lokuvala. Ngaphezu kwalokho, nezidingo Pte waphawula ukuthi isiginali ukuvala imigwaqo engekho esidlangalaleni ungakwazi kuphela zivela Federal Office of ujantshi. Ngakwelinye ihlangothi, kuvulwa hauls reinstates amadivaysi okuwuphawu, kuncike ohlelweni kanye netinsita, amandla kanye nezokuxhumana ngokuhambisana oda zokuphatha.
Ukwamukelwa nokuqhutshwa izingxenye ingqalasizinda
Faka into ngayinye imishini yezobuchwepheshe, eziyinkimbinkimbi ngomshini, imishini okuzenzakalelayo noma imishini kuphela ngemva ahlolwe kahle emzimbeni nokuhlolwa. Lezi imisebenzi nazo esiphathiswe umsebenzi okhethekile, bese ukwamukelwa ukusizakala abasebenzi. By endleleni, futhi kubahlanganyeli ithimba bakhonze kumele ukufinyelela ukusebenza ingqalasizinda ethize. Prakthiza kanye nokulondolozwa imishini, ku izinsiza okuyinto eyenziwa wesitimela traffic futhi ezihambisana yokukhiqiza imisebenzi. Ukuze imisebenzi enjalo zisetshenziswa iziqondiso ezidinga abakhiqizi ukwenza amayunithi ethize kakade. Ngemva kokuphela kwesikhathi nokongiwa nakho kwenziwa ukuhlolwa olunzulu imishini nobungqabavu bayo ngoba izinhloso ukusetshenziswa.
Ukulondoloza ibanga phakathi izindlela
Esinye sezimo ebaluleke kakhulu operation esitebeleni futhi kuphephe isethi isitimela iwukuhlale izindlela elilungile indawo nemingcele. Ikakhulu, i-Isikhala phakathi eksisi amabili ithrekhi nezipani ukuba umugqa oqondile kufanele kube 410 cm. Lokhu kulinganisela inyuka uma kuziwa imigqa chetyrehputnyh iwe emigceni maphakathi oda lesibili nelesithathu ukuthi. Kulokhu, ibanga lingafika ku 500 cm kakade ibanga phakathi izimbazo ibalwa for ukulayisha kabusha we ukuthutha e ukuthutha ngokwaso njengoba iDemo imithetho Pte -. Kuyinto 360 cm.
Ukukhanyisa Systems Inhlangano
Inhlangano yokukhanyisa kuqakathekile inqubo ukugcinwa kanye nokusebenza kwezimiso nojantshi. Khanyisa kuyadingeka umkhiqizo usebenza ukwamukela ukuhamba izitimela, ngesikhathi yokulayisha athula imisebenzi, nokunye. D. namaphrojektha Modern asetshenziselwa inhlangano izinhlelo ezinjalo. Ukuze ulondoloze imali kagesi, abaningi esiteshini izinqola amaphuzu yesevisi zidluliselwa ku-amadivaysi LED, nayo ngezimiso eziphakeme isisetshenziswa lobuchwepheshe. Enye into ukuthi Tor Railways lokwenqabela ukusetshenziswa kwanoma onobuhle ezithile amadivayisi ukukhanyisa, okungase zibulale ngokucacile izibani isignali.
Ingqalasizinda usebenza indawo elawula uhlelo
Ingxenye enkulu imishini obusebenzayo ingqalasizinda ujantshi zaba izingxenye ezizenzakalelayo neyesifunda, kanye oshiwo ngenhla ukukhanyisa uhlelo. Ngezinye anawo wemfanelo namahhovisi kusho isisebenzi disconnectors elawulwa kude, ukuqapha isimo lobuchwepheshe izimoto izingoma, kusho zokubonisa kanye nezokuxhumana. Ngokuhambisana Tor Railways isethi Izilawuli othomathikhi kumele ngokuqinile kunakwe. Enkonzweni akufanele kube nezingahlobene nendaba isakhiwo amadivayisi ukuphatha, futhi umsebenzi akuvunyelwe abantu nge apharathasi zokulawula ukuthi musa ukuhlangabezana nezidingo isikhundla ka-opharetha kule mboni.
nokugcina izinyathelo zokuvikela abagibeli
Ukuze indawo ukusetshenziswa kwabagibeli zihlanganisa izakhiwo, ezikhumulweni, ezisekelweni kanye ushintsho izindawo eyinkimbinkimbi ujantshi. Ngisho esigabeni ukuklama izakhiwo idatha futhi ezakhiwe ochwepheshe walala izici ezidingekayo ukuqinisekisa ukuhamba ephephile zabantu. Ngokwesibonelo, kulondolozwe ukuhwebelana ngesimo amabhuloho nemihubhe ezingeni elifanayo njengoba izindlela okuhloswe ukufaka abezinyawo decking ekhethekile, izikhombo nezixwayiso elihambisana Pte. Yini eyenza leli elivamile isethi yesimanje imithetho? Ngaphezu kokunikeza zokuphepha, amazinga futhi libeke inhlangano ukuhlala ukhululekile abagibeli. Kuze kube yimanje, futhi ihlelwe izindawo zokungcebeleka, emadokodweni, i-automatic service amaphuzu, nokunye. D.
Russian isimo nojantshi lulonke lusesimweni ezingeni egculisayo, nakuba hhayi zonke izifunda kukhona ekwandeni imishini zobuchwepheshe, imishini kanye mkhosi amadivayisi efanayo. Ngesikhathi esifanayo eshintsha Pte nojantshi ngamakhasimende nje ukwethulwa izixazululo oluseqophelweni ingxenye amasevisi ngomshini, futhi ngokuya ezintsha zokulawula. Ngokwesibonelo, kwenziwa izinguquko iziqondiso eziphathelene nenhlangano ukuxhumana phakathi kwamalungu iziteshi ezahlukene. Ohlwini izindlela zokuxhumana kukhona kumadivayisi eselula, kodwa kuyogcina ukuhlobana izixazululo bendabuko, okuvame bazuze okuningi nezobuchwepheshe nozakwabo eziphambili ngokuya nokwethenjelwa nokwenziwa kwemisebenzi.
Kungenzeka yini ukuba uchithe owesifazane okhulelwe?
I-Church of the Flying Monster pasta. Ukholo pasta Monster
-Peruvian Inca Orchid: incazelo, ubuntu nokunakekela
Ambassador City Jomtien Inn 3 * (Thailand / Pattaya): indawo, incazelo, izithombe kanye nokubuyekeza